Kiinya waa wadan ku yaal bariga Afrika. Waxey xal la wadaagtaa wadammada Tansaaniya, Ugaandha, Harta Fiktooriya, Soomaaliya iyo Itoobiya. Dhinaca barina waxaa kaga dhagan Badweynta Hindiya. caasimada wadanka Kenya waa Nayroobi.
Mount kenya ama buurta kiinya waa buurta ugu ween wadanka Kiinya.
Nayroobi waa caasimada dalka Kiinya, waxaana degan dad gaaraayo ilaa 3,138,295 oo qof (dad tiriskii 2009).Magaca Nayroobi waxoo ka imaaday afka Masaayda, waxaana laga wadaa biyo qaboow. nayroobi waa magaalada affaraad oo ugu weyn afrika, markii laga reebo Qaahiro, Lagos iyo Johannesburg, lama oga in ee ka weyntahay Muqdisho. Magaalada Nayroobi waxaa la aas aasay taariikhda marka ee eheed 1899, waxaana waqtigaas la rabay in laga dhigo meel tareen isteeshin u ah tareenka ka soo baxo Yugandha isla markaas neh soo maro Mombaaso si oo u istaago nayroobi. Magaalada waxaa labedelay sanadka marka oo ahaa 1900 markii oo dab wada qabsaday magaalada.Taariikhda marka ee eheed 1907 Nayroobi waxee noqotay caasimada Bariga Ingriiska oo markaas la isku dhihi jiray wadamada Yugandha iyo Kenya. 1963 waxee magaalada noqotay caasimada dalka Kenya, waa markii oo wadanka xornimadiisa qaatay. Nayoobi waxaa ku yaalo garoonka diyaaradaha caalamiga ee Jomo Kenyatta International Airport, waxoona ku yaalaa geeska magaalada nayroobi iyo garoon kale oo asiga neh ku yaalo gees kale oo magaalada ka mid ah, laakiin uma weyno sida Jomo Kenyatta. magaalada waxee leedahay sadax laami oo waaweyn oo kala tago mmbaaso iyo magaalo yaal badan oo yar yar iyo mid tago garoonka diyaaradaha caalamiga.
Qaamuus (Af-Ingiriis: dictionary; Af-Carabi: قاموس) waa ereyo badan oo la soo ururiyay kuwaasi oo luuqad (ama af) ku turjumaya luuqad kale. Sida caadiga ah, qaamuusku wuxuu u habaysan yahay nidaamka alifbeetka; taasi oo ka bilaabanta xarafka koowaad ee luuqadaasi.Qorista iyo diyaarinta qaamuus waa shaqo aad u badan oo qaadata wakhti iyo maal; waxaana maanta dunida jira qaamuusyo badan oo isku fasira labo ama dhowr luuqadood. Tusaale ahaan, waxaa jira Qaamuuska Af Soomaaliga iy Ingiriiska, iyo kuwo kale oo badan.
Shabakada isku xirka Caalamka (Ingiriis:World Wide Web) loona soo gaabiyo WWW inta badana loo yaqaan Web , kaas oo loo isticmaalo isku xirka dokumentiyadda iyada oo la adeegsanayo qadka Internetka,